ဘဆွေရဲ့အကြွေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဘဆွေရဲ့အကြွေး
Posted by ကူမားရ် on Jan 31, 2013 in Copy/Paste | 27 comments
ဂျန်န၀ါရီလကုန်ပြီ ဖြစ်သောကြောင့်ဟောလီးဒေးများ စပေးသဖြင့် ဘဆွေ နှစ်ပတ်အနားရပါသည်။
တစ်နှစ်တာအတွင်း တင်ရှိနေသော စာကြွေး ၊ ဘုရားတရားကြွေး ၊မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကြွေး၊ လူမှုရေးကြွေး၊ အိမ်တွင်းမှုကြွေး အစရှိသော ကြွေးပေါင်းမြောက်မြားစွာ ကိုပြန်လည်ပေးဆပ်ရန် ရရှိသော တိုရေရှားရေ အချိန်ကောင်းလည်းဖြစ်ပါသည်။
စားသောက်ဆိုင် သုံးဆိုင် အား မနက်မိုးလင်း ညမိုးချုပ် ပါတ်ချာလည် လှည့်ကာအလုပ် လုပ်နေရသဖြင့် စားချိန် အိပ်ချိန် မှလွဲလျှင် အချိန်ပိုမရှိသလောက် ရှားပါးခဲ့သောကြောင့် မိဘ၊ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်း အဖွဲ့အစည်း၊အိမ်နီးနားခြင်း အစရှိသော သူများ အပေါ် လူမှုရေး ပျက်ကွက် ကာ တာဝန်မဲ့မှုကြွေး တင်နေခဲ့ သည်မှာ ကြာပြီဖြစ်သည်။
ထိုအကြွေးများထဲမှ အဓိက ပေးဆပ်ရန် ရှိနေသည်မှာ Mandalay Gazette အပေါ်တင်ရှိနေသော ပေါင်းစည်းပါဝင်မှုကင်းမဲ့ခြင်း အကြွေး ပင်ဖြစ်ပါသည်။
မန်းဂဇက်ချစ်သူများ စာပေဆုပေးပွဲနှင့်မန်ဘာများတွေ့ဆုံပွဲ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြီးစီး ခဲ့ပါပြီ ။
အဖွဲ့ဝင်များ အားလုံး အင်တိုက် အားတိုက် စိတ်ရော ကိုယ်ပါ ပူးပေါင်း ပါဝင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြ သည်။
ရပ်ဝေးမြေခြားမှ လာရောက်ပြီး လူအင်အား ငွေအင်အား စိတ်အင်အား ဖြင့်ပေါင်းစည်း ပါဝင်ဖြည့်စွမ်းကြသည်။ မလာရောက် နိုင်သူတွေက စာအား ကွန်မန့်အားဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ကြသည်။
ဘဆွေ ဘာတစ်ခုမှ မလုပ်ခဲ့ မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါ။
မဖြစ်စလောက် ထည့်ဝင်သော အလှူငွေ အတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း စာဖြင့်ရေးသားဖော်ပြသော အဖွဲ့ဝင်များ (ကိုချော၊မပဒုမ္မာ) အစရှိသော သူများ အပေါ် လည်း လေးစား သမှုပြုသော အားဖြင့် ကွန်မန့်တစ်ကြောင်း ပင်မပြန် နိုင်ခဲ့ပါ။ မန်းဂဇက်ချစ်သူများ စာပေဆုပေးပွဲနှင့်မန်ဘာများတွေ့ဆုံပွဲ ဖြစ်မြောက်အောင် ဖန်တီးခဲ့ကြသော ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များ (ဦးပါ၊ ကိုကြီးမိုက်၊မမ၊ ရွှေတိုက်၊ အမတ်ကြီး) အစရှိသော သူများအားလည်းကောင်း၊ တစ်သောင်းတန်ဆု အတွက် သိန်း တစ်ဆယ်ကျော် အကုန်ခံ ကာ နိုင်ငံရပ်ခြားမှလာရောက် ပါဝင်ခဲ့သော ကိုကျောက်ခဲ၊ ဆုငွေလည်းထည့် လှူ အကြွေးအမွေးလည်း တာဝန်ယူ ဒါတောင် အားမရလို့ အာသာပြေ ထပ်ပြီး ဆွဲရအောင်ဆိုတဲ့ အဘဖော၊ဗလာမပါကံစမ်းမဲ ဖောက်တဲ့ မနိုဗွီ၊သော့ချိတ်တွေနဲ့ အမြဲတမ်းအမှတ်ရနေစေမယ့် ကို ပီချိုကြီး၊ လက်ဆောင်တွေ ပို့ပေးလိုက်တဲ့သကြီး တို့ အပြင် အခြားသော ကျေးဇူးတင် ထိုက်သော သူများကိုလည်း စာလေးတစ်ကြောင်းနဲ့တောင်လေးစားကြောင်း အသိအမှတ်ပြု ကျေးဇူးတင်စကား မဆိုနိုင်ခဲ့ပါ။
အဲဒီလောက် မသိသားဆိုးဝါးလှတဲ့ ဘဆွေ ကို ကိုဘလက်ချောက သူ့ပိုစ့်တစ်ခုမှာ ဟောဒီလို လူရာသွင်း နေရာထိုင်ခင်း ပေးခဲ့ပါသေးတယ်၊( ကျွန်တော်ကတော့ ဘာမှပြန်မရေးနိုင်တဲ့ အပြင် သူ့မိခင်ကြီးနေမကောင်းတာ ကိုတောင် လူနာမေးဖော်မရခဲ့ပါဘူး။ ကို ဘလက်ချောကိုဒီနေရာကနေ တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်)
(မန်းဂဇက် ချစ်သူများ စာပေဆု ပေါ်ပေါက်လာခြင်းပါပဲ…။
၂၀၁၂ ခုနှစ် August လက စတင်ချီးမြှင့်လာခဲ့တဲ့ မန်းဂဇက်ချစ်သူများ စာပေဆု ကို ဒီလ ၂၀ ရက်နေ့မှာပဲ ဆုပေးပွဲ
ကျင်းပတော့မယ်လို့လည်း နားစွန်နားဖျား ကြားထားရပါတယ်…။
အဲဒီ မန်းဂဇက် ချစ်သူများ စာပေဆု ပေါ်ပေါက်လာရာမှာ ကျေးဇူးတင်ရမယ့် ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ရှိပါတယ်…။
အရင်ဆုံး ကျေးဇူးတင်ချင်တာက အဘဆွေ ဖြစ်ပါတယ်…။
အဘဆွေ ဟာ ဒီနှစ်ဆုပေးပွဲအတွက် ငွေကျပ် တစ်သိန်း နှစ်သောင်းတိတိ ကို ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါတယ်…။
ကျွန်တော် ကျေးဇူးတင်ချင်တာက အဘဆွေရဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုကိုပါ…။
အခု ဖြစ်လာတဲ့ မန်းဂဇက်ချစ်သူများ စာပေဆု မှာ အဘဆွေရဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဟာ အင်မတန် တန်ဘိုးကြီးခဲ့တယ်လို့
ကျေးဇူးပါ အဘဆွေ ခင်ဗျား…။)
အမှန်က ကျွန်တော်ကသာ လျင် အားလုံးကိုကျေးဇူး တင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘဆွေ ဆိုတဲ့ ဘာမှ မဟုတ်တဲ့နှမ်းတစ်လုံးကိုမန်းလေးဂဇက်မှာ(မန်းဂဇက်ချစ်သူများစာပေဆုပေးပွဲနှင့်မန်ဘာများတွေ့ဆုံပွဲမှာ) ဆီဖြစ်ခွင့်ပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူး တင်ရမှာပါ။
(မန်းဂဇက်ချစ်သူများစာပေဆုပေးပွဲနှင့်မန်ဘာများတွေ့ဆုံပွဲ) အတွက် အင်တိုက် အားတိုက် စိတ်ရော ကိုယ်ပါ ပူးပေါင်း ပါဝင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြ သည်. အဖွဲ့ဝင်များအားလုံး၊
မတက်ရောက်နိုင်သော်လည်း အဝေးမှ အားပေးကြသောမောင်နှစ်မ များ အားလုံး ခင်ဗျား
ကျွန်တော် ဘဆွေ အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကြောင့် ကျေးဇူးတင် ကြောင်းပြောသော သူများအား ပြန်လည် တုန့်ပြန်မှုမရှိခဲ့ခြင်း… ကော်မန့် အားဖြင့်သော်လည်းကောင်း ပိုစ့် အားဖြင့်သော်လည်းကောင်း မပံ့ပ်ိုး ပါဝင်အားပေးနိုင်ခဲ့မှု မရှိခဲ့ ခြင်း အတွက်လည်းကောင်း… ကျေးဇူးတင်ထိုက်သော (ကိုကြိးမိုက်၊ကိုပါလေရာ)တို့ အပြင် အခြားသောမိမိထက် အသက် ၀ါကြိးသော အစ်ကိုများ၊(ရွှေတိုက်၊အမတ်မင်း)အစရှိသောညီငယ်များအားလုံး၊အစ်မကြီးမျာအားလုံး(ဒေါက်တာမကြီး၊အစ်မ မမ)အပါအ၀င် ညီမငယ်များအားလုံး ကိုကျေးဇူးတင်စကား မပြောကြား နှိုင်ခဲ့ခြင်း အတွက်လည်းကောင်း …
အစရှိသော ရိုင်းပြတဲ့ မသိသား ဆိုးရွားမှု များအတွက်
ကျွန်တော်ဘဆွေအားခွင့်လွတ် နားလည်ပေးပါမည့် အကြောင်း
ယခုစာဖြင့်လေးစားစွာအနူးအညွတ်တောင်းပန် အကြွေးဆပ် အပ်ပါသည်။
သြော်ကိုဗစွေ ကိုဗစွေ အကျွေးစိုလို့ ဗာများဗာလိမ့်လို့ ၀င်ဖတ်လိုက်တာ ဟီ …
ခင်းဗျားအကျွေးဂ ဒီလိုဂိုဗျ။ ကျုပ်မှာဒေါ့ ငွေအကြွေးတွေ ပေးစရာ တော်တော်များများကို ရှိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မဆပ်ဖူးဗျ။ ပျံစပ်ဖို့လဲး စပ်စရာငွေမရှိဗူးဗျ။ ယခုလိုလို အကျွေးတင်ဒါကိုပင်
တစ်လေးတစ်ဆား ပြန်စပ်ဖို့ ကြိုးဆားသူ ကိုဗစွေကို ကျုပ်မောင်မိုဘိုင်းမှ လေးစားလှဗါကြောင်းးးးးးးးးးးး
ဂလိုဆပ်ရုံနဲ့ ရမားဂျ ..
နောက်ဒါဘာ ခည ….
အစ ပထမ ခေါင်းစဉ်ကျိပီးးး
“ဘဆွေ” ဆိုတော့ .. “akswe” ဆိုဒဲ့ ဘဘဂျီးများ ဖစ်နေဒလားလို့ …
ဟုတ်လည်း ဟုတ်ဒါဘဲနော့ ….
လာရောက်မန့်သွားတဲ့ ကို မိုဗိုင်း ဂိုကြေးဇူး တင်ရှိဗာဂျောင်း…
akswe ခေါ် အဘဆွေပါ..ရွာထဲရောက်စက ရွာတော့်ရှင်ပေးထားတဲ့နာမည်.. ကြိုက်လွန်းလို့ ရှေ့က ‘အ’ ဖြုတ်ပြီး နစ်နိမ်းယူထားတာ…
အရီးလတ် ကခေါ်တာတော. ” မောင်လေး အဘ ကိုဆွေ” တဲ့…
ဖတ်ပြီး ရွာနဲ့ ရွာသူရွာသားတွေအပေါ်
ထားတဲ့သဘောထား၊ စေတနာကို လေးစားမိပါတယ်ဗျာ
အဘဆွေတို့လို မပြောနဲ့ ကျနော်တို့လို
လူငယ်လည်းဖြစ် အရာရာကို သွက်သွက်လက်လက်
ကိုယ့်အဖြစ်ကိုလည်း ရှက်မိပါရဲ့ခင်ဗျ ၀န်ခံပါတယ်
ကိုယ်တိုင်လည်း ရှက်မိ အားနာမိ လို့ကိုဒီပိုစ့်ရေးတင်လိုက်တာပါ။
တာဝန်မဲ့ မိတဲ့အဖြစ် အပြစ်မှ သက်သာပါစေတော့၇ယ်ဆိုပြီး…
ကြောင်ကြီးလို apoမlogy ပဲ တောင်းပန်တော့လည်း ကျေအေးရတာပေ့ါ။ :harr:
မောင်လေးရဲ့အဘ ကိုဆွေ ဆိုတော့ကာ….
ဘကြီးဆွေ လို့ ခေါ်ရမယ် ထင်တယ်။
မပြောမရှိနဲ့နော်.. ခေတ်နောက်ကျ မကျန်ရစ်အောင် သတင်းပေးတာ။
သဂျီးတောင် နောက်၆လမှာ လုပ်မယ့်ပွဲကို လာဖို့ ခုကတည်းက စိုင်းပြင်းနေပြီ။ :hee:
ကျွန်တော်မောင်ကျောက် ဂဇတ်ရွာရဲ့ဆုကို တန်ဘိုးထားပါတယ်…
အဓိက ကတော့ ရွာသူရွာသားများနဲ့ဆုံချင်လို့ပါ…
နှစ်ဆန်းပိုင်း ဘောနက်ကလေးလည်းရ ငွေယားလေးလည်းရွှင်ဆိုတော့…
နောင်များလည်း လူစုကြမယ်ဆိုရင် ပြန်ဖြစ်ပါဦးမယ်…
အိုဘယ့် … ကျုပ်ဘဂျီးး
ဘဘဆွေတောင် နံမယ်ဂို ညန်မာလို ပြောင်းလိုက်ပီ ..
ဘဂျီးလည်း ညန်မာလို ပြောင်းဒေါ့ ..
ကိုဘဆွေရဲ့ ပို့စ်လေးတွေ တွေ့ခဲ့ရပြီးကတည်းက
ကြေအေးပေးတဲ့အတွက် ရှဲရှဲ ပါခင်ဗျ..နောက်တစ်ခါလုပ်မယ့်ပွဲကိုတော့ ရောက်အောင်လာမယ်နော..
အမှန်က ကျွန်တော် ဘယ်သူ့မှအသိမပေးဘဲ ခွင့်ရဖို့ ကြိတ်ကြံနေတာ..ပြောဆိုပြီးနေခါမှ
ကြားထဲမှာ တစ်ယောက်က အမ်မာဂျန်စီ ဆိုပြီး ၀င်အလစ်သုတ် သွားလို့ ဆယ်ရက်နောက်ကျပြီးမှယူလို့ ရတယ်..
ကပ်လွဲလေးခင်ဗျ.. ကပ်လွဲလေး.. (တောက်စ်) ခရက်ဒစ်တူ ဂီဂီ
သကြီးနဲ့ အတူတူ လမ်းလျှောက်ထွက်ကြရအောင်ပါနော( နီ၊နက်၊စိမ်း၊ရွှေ၊ပြာ) အရောင်မရွေးပါနော…
အဘဆွေခင်ဗျား ကျေးဇူးတင်လို. ကျေးဇူးပါခင်ဗျ……..
လူကိုယ်တိုင်မပါဝင်နိုင်သော်လဲ အဘက်ဘက်က စိတ်ပူ အားပေး စိတ်ထဲထည့်ထားတာလေးကို ပဲ အားရှိလှပါပြီဗျာ……..
လူငယ်တွေချည် လုပ်ဆောင်လို.မရဘူးခင်ဗျ…… လူကြီးတွေပေးတဲ့ အတွေ.အကြုံနဲ. စိတ်ဓာတ်ခွန်အား အားပေးစကားလဲ လိုပါသေးတယ်ခင်ဗျ…….
ဒီပွဲမှာ ကျွန်တော့်ကို ဝေဖန်အကြံပေးတဲ့ ဦးကြီးမိုက်နဲ. အကုန်ထောင့်စိကူညီပေးတဲ့ ကိုမတ်ကို လဲ ရောကျေးဇူးတင်လိုက်ပါတယ်ဗျာ…….
အကြောင်းကြောင်းကြောင့် လူချင်းမတွေ့ဖူးပေမဲ့ လည်း ရင်ထဲက လေးစားခင်မင်နေပါတယ် ခင်ဗျား။
နောင်မဝေးတဲ့ အချိန်မှာ ဆုံကိုဆုံဖြစ်ကြမှာ ပါ။ နောက်ပွဲတွေ အတွက်လည်း အားဖြည့် ပါဝင်ဖို့ အဆင်သင့်ပါ။ဘာပဲလုပ်လုပ် ကျွန်တော့်အတွက် ထောင့်ကလေးတစ်နေရာစာ ချန်ထားပြီး mg အတွက် နှမ်းတစ်လုံး ဖြစ်ခွင့်ပြု ပါနော။ နားလည် ခွင့်လွတ် ပေးမှုအား လေးစားစွာခံယူပါတယ်ခင်ဗျား။
ပွဲအတွက် တောက်လျှောက် စိတ်ရော ကိုယ်ပါ စွမ်းဆောင်သွားတာသိပြီးသားမို့ လေးစား အားကျမိပါတယ်။ လူငယ်တွေပေမယ့် အားလုံး ထောင့်စိအောင် လုပ်သွားနိုင်ကြတာ ချိမ်းမွှန်း မဆုံးဘူး။
အမတ်ကြီးကိုလည်း လေးစားခင်မင် ကျေးဖူးတင်လျှက် ပါနော..
အဆွေတော် နောင်တော် ယခုလို သတိရစွာ ပိုစ်တင်ပြီး ပြောတဲ့ အတွက် ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ရှိလှပါကြောင်း။
အဆွေတော် မအားလပ်မှုများကြောင့် ရွာဘက်ကို မလှည့်အားသည် ကို သိကြားသဖြင့် များစွာ စာနာမိကြောင်း။
အဆွေတော် ယခု အားလပ်ရက်ရောက်ပြီ ဖြစ်တဲ့ အတွက် အဆွေတော် နှင့် ယခင်ကလို ပြန်လည်၍ စာပေများ နှီးနှောဖလှယ်ခွင့်များ ရှိလာနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါကြောင်း။
အဆွေတော် အားလပ်ရက် ခရီးထွက်ခဲ့လျှင်လည်း ခရီးသွားအကြောင်းများ ဆွေးနွေးရေးသားမည်ဟု ထင်မှတ်မိပါကြောင်း။
အဆွေတော် အား ကျွှန်ုပ်တို့ ဆွေမျိုးပေါက်ဖော် ညီရင်းအကိုလို သဘောထားပြီး ယခင်ကလို နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုမည် ဖြစ်ပါကြောင်း။
အော် ပေါ်လာပြီကိုး ရွာလူကြီးလူငယ်များအားလုံးက ခွင့်လွှတ်တတ်ကြပါတယ် စိတ်မပူပါနဲ့
စကားတောင် ဟဟ မမေးရဲဘူး
တင်ပါတယ် ၊မြှောက်ပါတယ်၊ ပသ ပူဇော်ပါတယ်..
အမိုက်အမဲလေးအား ဗွေမယူကြောင်း သိရသည့်အတွက် များစွာ စိတ်ချမ်းမြေ့ မိရပါကြောင်း..
စာနာ နားလည်နှိုင်မှုအား ကျေးဇူးအထူးတင်မိရပါကြောင်း…
အခွင့်ရသော နှစ်ပတ်အတွင်း ရွာထဲတွင် အသားကုန် လျှမ်းမည်ဖြစ်ပါကြောင်း…
ဘယ်ခရီးမှ မသွားဘဲ အိမ်တွင်နေပြီးသကာလ စိတ်ထင်ရာ အစားအသောက်များကို တစ်ခုပြီးတစ်ခု လက်တည့်စမ်း မည်ဖြစ်ပါကြောင်း…
ဆွေမျိုးပေါက်ဖော် ညီရင်းအကိုလို သဘောထားပြီး ယခင်ကလို နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုမည် ဖြစ်ကြာင်း သိ၇သည့်အတွက် ပျော်ရွှင်ကြည်နူးမိရပါကြောင်း…
မင်္ဂလာ လက်ဖွဲ့ ကို အချိန်မီ မပို့နိုင်ရွေ့ ပြန်လာမှ ကိုယ်တိုင်ယူလာမည့် အကြောင်း….
”အော် ပေါ်လာပြီကိုး ရွာလူကြီးလူငယ်များအားလုံးက ခွင့်လွှတ်တတ်ကြပါတယ် စိတ်မပူပါနဲ့”
သမီးလေသံက..အဘ ကျောင်းပြေး ရေသွားခိုးကူးပြီး အိမ်အပြန် အမေအိမ်ရှေ့က ကြိမ်လုံးနဲ့ ထိုင်စောင့်နေတာ က်ို ချက်ခြင်း ပြေးမြင်မိတယ်..ဒူးတုန်ထှာ.. ;) ခွိခွိ ဂစ်…
ဆွေတော် မျိုးတော် ရဲ့ စကားလေးတွေ မြင်ရတာ အင်မတန် အေးချမ်းတဲ့အချိန်မှာ နွေးထွေးလှပါတယ်။
အလုပ်များသူရဲ့ ရင်တွင်းဖြစ် ဝေဒနာကို ခံစားနိုင်တာမို့ ရွာကို ဝေးဝေးက နေ ကြည့်နေတာရတဲ့ အဖြစ်ကိုလဲ ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်။
အလုပ်ကအပြန် အိမ်မှာ အိမ်အလုပ်တွေ လုပ်စရာမလိုတဲ့ အဖော်လေးနဲ့ဆိုရင် အချိန်တွေများ ပိုလာလေမလား။
ရွာအပေါ်မှာစေတနာမိုးရွာခဲ့တဲ့ မောင်လေးအဘဆွေ တစ်ယောက် ဒါထက်ပိုပြီး အောင်မြင်တိုးတက်ပါစေ။
အိမ်တံခါးဖွင့်ပေးမဲ့ အလိမ္မာ အိမ်ပါအဖော်လေး (မိန်းကလေး) လဲ ဘေးမှာရောက်လာပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
ရွာထဲ လူယောင်မပြပေမယ့် ရွာနဲ့ မလှမ်းမကမ်းမှာ ရှိတယ်ဆိုတာ အဘဆွေစာထဲ ဖတ်ကြည့်ရင် သိပါတယ်။
(တောက်စ်က တော့ မူပိုင် ဂဂ နော်၊ဂီဂီ မဟုတ်ဘူး)
အဲတော့ နောက် တစ်ခါကျရင်သာ လာနိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်။
အရီးကော်မန့်တွေက အမြဲတမ်းအားဖြစ်စေပါတယ် အရီးရေ….
နှင်းတွေအရမ်းကျတုန်းက သတိရစိတ်ပူနေမိသေးတယ်.. အရီးတို့ဘက်ပိုကျမလားဘဲ…ဘာမင်ဂမ်ဘက်တော့ နှစ်ပေကျော်လောက်ကိုရှိတာ ကားတောင်သွားမရဘူး။
”အလုပ်ကအပြန် အိမ်မှာ အိမ်အလုပ်တွေ လုပ်စရာမလိုတဲ့ အဖော်လေးနဲ့ဆိုရင် အချိန်တွေများ ပိုလာလေမလား။”
”အိမ်တံခါးဖွင့်ပေးမဲ့ အလိမ္မာ အိမ်ပါအဖော်လေး (မိန်းကလေး) လဲ ဘေးမှာရောက်လာပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။”
မလုပ်လိုက်ပါနဲ့ အရီးရဲ့…တော်ကြာ ရှိစုမဲ့စု ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင် အချိန်လေး တွေ ပါ ပေးလိုက်ရတဲ့ အပြင် သူ့ထဘီ ပါလျှော်ပေးနေရမှ အရီးမောင်လေး ဗစ်တိုးရီးယား ဘက်ခ်ဟမ်း တမာရွက်ပြုတ်စော်နံ့ ရေမွှေး နံ့လေးနဲ့ အလုပ်သွားနေရလိမ့်မယ်..ဟီးဟီး
မောင်လေး အဘ ကိုဆွေ။
”ရွာထဲ လူယောင်မပြပေမယ့် ရွာနဲ့ မလှမ်းမကမ်းမှာ ရှိတယ်ဆိုတာ အဘဆွေစာထဲ ဖတ်ကြည့်ရင် သိပါတယ်”…
အဲဒီလို တွေးတတ် မြင်တတ်လို့လဲ ဆရာဝန်ဖြစ်တာ….တော်တီးတီးတော် ပဲ
အိုက်လို စိတ်သက်သာရာ ရ အောင်မန့်ပေးတဲ့ အတွက်ပြန်လာရင် လာကန်တော့မယ်..မုန့်ဖိုးတော့ပြန်ပေးပေါ့…..
ကွန်းမန့်နောက်ကျနေတာ ခွင့်လွှတ်ပါ ခင်ဗျ…။
ကျွန်တော် ရေးခဲ့တာ အရှိအတိုင်းရေးလိုက်တာပါခင်ဗျ…။
ငွေကြေးထက် တန်ဘိုးကြီးပါတယ်လို့လည်း ရေးထားပါသေးတယ်…။
ကျနော်ရွာထဲမှာအနေကြာပြီး ခုထိ ကျနော်နဲ့မနီးသေးတာတော့ အဘဆွေလို့ပြောရတော့မယ်ထင်ပါရဲ့။
ကော်မန့်နဲ့စိတ်သက်သာရာ ရအောင်လုပ်ပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ကျေးဆိုရင် ဒီကပိုသပေါ့…
ပျောက်နေလို့ စိတ်ပူနေမိတာ ခင်ဗျ.. မိခင်ကြီးနေကောင်းသွားပါပြီလား….
ခင်မင်ရင်းနှီး စွာပို့သသော မေတ္တာကို ခံယူပါနော…
ရွာထဲစရောက်တဲ့နေ့ကတည်းက ကိုပေါက်ရဲ့နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုမှု ကော်မန့် နဲ့ ပွင့်လန်းလာရတဲ့ ဘဆွေပါခင်ဗျား…
ဒီလိုလေး နှုတ်ဆက်ပေးခဲ့တာ မေ့သွားလို့လား အကိုရေ့…
(kopauk mandalay says:
Swe ကို ဆွေလို့ထွက်လိုက်လို့ ။
ak က အကြောရဲ့အတိုကောက် swe ကို ဆွဲလို့ အသံထွက်လို့ သုံးလုံးပေါင်းလိုက်ရင်
akswe ကတော်တယ်နော် မြန်မာပြည်က အဆိုတော်တွေအတိုင်းဘဲ ။
စာတစ်ကြောင်းထဲရေးပြီး မေးခွန်းတွေမေးခိုင်းပြီး ပြန်ဖြေသွားတာကိုပြောတာပါ။
ကြိုဆိုပါတယ် မိတ်ဆွေတစ်ယောက်တိုးလာလို့ ။
ယော့ရှိုင်းယားဆိုတာ အလန်ရှီးယားနဲ့ အမျုိးတော်လားဗျာ။
မသိလို့ မေးတာ မှားသွားရင်းစိတ်မဆိုးပါနဲ့။
ကိုပေါက်ရယ် အလိုလျောက်ကို တော်နေတော.တာပါပဲလား ဟင်
လိုသလောက် ဥာဏ်တွေ ကထွက်နေတော.
မှိုပေါက် သလို ဆက်ကာ ဆက်ကာ ရေးသွားလိုက်တာများ
အကြိုထောက်တာ ကိုပေါက်ရာ ၀မ်းသာမိတာမို.
မြို.မန္တလာ ဒို.ရွာသားတွေရဲ. ထွးပွေ.မှုကြုံ။
စာတွေဖတ်ပြီးလေးစား ခင်မင်နေရပါတယ် အစ်ကို။)
အဆက်အသွယ်နဲနေကြရတာ က ကျွန်တော့ ရဲ့ ညံ့ဖြင်းမှုကြောင့်ပါ..
အကြောင်းမတိုက်ဆိုင်လို့ လူချင်းမတွေ့ဘူးသေးကြပေမယ့် နှလုံးသားတွေ ချင်း ရင်းနှီးပြီးသားပါခင်ဗျာ..
ဒီတစ်ခါ ပွဲလုပ်ရင်တော့ ရောက်အောင်လာပြီး ဖြစ်အောင် ဆုံကြမယ် အကိုရေ..
ချစ်ကြည်သံလေးတွေဖတ်ရတော့ ကြည်နူးရပါတယ် ကိုဆွေရေ
ဘဆွေတို့များ ပိတ်ရက်တွေအများကြီးရသွားတော့ ………စာကြွေး ၊ ဘုရားတရားကြွေး ၊မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကြွေး၊ လူမှုရေးကြွေး၊ အိမ်တွင်းမှုကြွေး အစရှိသော ကြွေးပေါင်းမြောက်မြားစွာ ကိုပြန်လည်ပေးဆပ်ရန်…….. လို့သာပြောတာ အမူအရာ အဗာတာကတော့ စက်စလူးခါနေပီ သိပ်သိသာတာပဲ….
အူးကျောက်က အဲ့တစ်ခေါက်က ဘုရားဖူးချင်တာထက် လိပ်ဥတူးချင်စိတ်များနေတာပါ..